2 Askari Itoobiyaan ah oo ku dhintay qarax ka dhacay deegaanka Halgan.
Monday August 05, 2019 - 11:50:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xoogaga Shabaabul Mujaahidiin ayaa markale qarax xooggan ku beegsaday ciidamada Itoobiya ee ku gummeysiga ku jooga bartamaha dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya deegaanka Halgan ayaa sheegaya in jugta qarax xooggan laga maqlay goob ay ku socdaalayeen ciidamo katirsan Xabashida Itoobiya ee saldhigga ku leh deegaankaas.
Ciidamo Itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax aad u xooggan oo maanta barqadii lagula beegsaday deegaan katirsan gobolka Hiiraan.
Qaraxa ayaa ka dhacay afaafka hore ee deegaanka oo ciidamada Itoobiya ay ku socdaalayeen, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 askari ay ku dhinteen qaraxa oo jugtiisa laga maqlay dhammaan deegaannada hoos yimaad deegaanka Halgan.
Goob joogayaal warbaahinta lahadlay daqiiqado kadib markii uu qaraxu dhacay ayaa sheegay in ay maqleen jugta qarax xooggan waxaana la arkayay ciidamada Itoobiya oo xiraya dhammaan waddooyinka soo gala goobtii ay ku socdaalayeen ee qaraxu ku haleelay.
Bishii lasoo dhaafay ayay Al Shabaab qaraxyo miino iyo weeraro toos ah ku beegsatay Melleteriga Itoobiya ee saldhigyada ku leh deegaanka Halgan ee kala qeybiya degmooyinka Beled Weyne iyo Buula Burde.